‘Mpifindra Monina, Vitanay Ny Asa’ Lahatsary Mozika Manasongadina Ny Tsy Rariny Ao Etazonia Sy Any Ivelany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2017 5:45 GMT
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Marlena Fitzpatrick ary navoaka tao amin'ny Enclave. Nasiam-panovana sy navoaka indray ato amin'ny Global Voices izany rehefa nahazo alalana avy amin'ny Enclave.
Tamin'ny faran'ny volana Jona, nisy ny famoahana lahatsarin-kiran'ny “Mpifindra Monina, Vitanay ny Asa” tao amin'ny rakikira “The Hamilton Mixtape” avy amin'ny mozika Broadway “Hamilton”, mifototra amin'ny fiainan'i Alexander Hamilton, izay nandray anjara lehibe tamin'ny fananganana an'i Etazonia tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-18.
Ny fampisehoana nahazo tsikera mafy, izay aingam-panahy avy amin'ny tantaram-piainana nosoratan'i Ron Chernow dia manome feo mozika ho an'ny tantara amin'ny fomba samihafa, manomboka amin'ny hip-hop sy hira milamina hatramin'ny pop, ary ireo mpilalao sarimihetsika avy amin'ny tontolo maro samihafa milalao ny anjara toeran'ny fotsy hoditra. Ny “Mpifindra-monina, Vitanay ny asa” dia tononkira hiraina ao amin'ny mozikan'i Hamilton, izay nifindra monina tany amin'ny zanatanin'ny Amerikana fony zatovo, sy i Marquis de Lafayette, andriana Frantsay izay niady nandritra ny Ady Revolisionera Amerikanina.
Ny endriky ny hira izay hita ao amin'ny “The Hamilton Mixtape” dia manasongadina an'ilay poeta Somaliana-Kanadiana K’naan Warsame, ilay Pôrtô Rikàna mpanao rap sady mpanoratra Residente, ilay Britanika Pakistaney mpilalao sarimihetsika, mpanao rap sady mpikatroka Riz Ahmed, ilay mpanakanto sady mpilalao sarimihetsika Meksikana Amerikanina mandrakitra hip hop Snow Tha Product,, ary ilay Amerikana mpilalao sarimihetsika, mpiangaly rap sady mpihira Daveed Diggs. Mpanakanto fanta-daza any Etazonia izy rehetra ireo noho ny fanoherany ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny fanavakavahana.
Novokarin'i Lin-Manuel Miranda, izay nanoratra ny hira ihany koa ny lahatsary. Mampiseho sarangan'ny mpiasa tsy raharahiana monina ao anaty aloka sy matetika iharan'ny heloka an'ady, herisetran'ny polisy, fanandevozana, herisetra mamely ny mpifindra monina sy fahafatesana tsy amin'ny antony izany. Tena zava-dehibe ny fotoana namoahana azy, tonga tamin'ny fotoana izay hanaovan'ny firenena adihevitra mafàna momba ny fanavaozana ny lalàna momba ny fifindramonina sy ny fankahalana vondrona vitsy an'isa nanjary miharihary kokoa. Hoy ny vakin'ny ampahan'ny tononkira hoe:
Raha ny marina, nanome ny fanohanany ho an'ny mpifindra monina i Miranda: Firaisamben'ny Vitanay ny Asa, nokarakarain'ny Federasiona Hispanika. Ahitana fikambanana mpiara-miasa miisa 12 ny firaisambe, izay miasa eny ifotony manerana an'i Etazonia mba hanome tolotra fiovan'ny fiainana – solontena ara-dalàna, fiarovana, sy hetsika fanentanana “fantaro ny zonao”, sy ny maro hafa – ho an'ireo mpifindra monina, mpitsoa-ponenana sy ireo mpitady fialokalofana izay tonga aty amintsika mba hitady Nofinofy Amerikana.